Mmemme WoopShop Corporate Social Responsibility
Mmemme Maka Ọrụ Ndị Ọrụ Anyị
Iji mee ka ha na-amụmụ ọnụ ọchị ..
O nwere ihe ị ga-enweta ka ọ bụrụ azụmahịa na-aga nke ọma karịa naanị ịnweta uru. Ọ bụkwa maka ime ezigbo echiche na inwe mmetụta dị mma n’etiti ọha mmadụ.
Dịka onye isi n’azụmahịa E-azụmahịa, anyị bụkwa ụlọ ọrụ na-ahụ maka ọrụ na-arụ ọrụ iji hụ na ịzụ ahịa n'ịntanetị na-eme ka mmepe obodo na mmepe mmekọrịta gaa na mba Africa.
Anyị emeela ka ndị ọrụ anyị, ndị ahịa anyị, na ndị mmekọ anyị sie ike. Ya mere, anyị debere pasent nke uru maka mmemme ọrụ ebere a ma nye ndị ahịa anyị ohere isonye na mmemme a site na inye onyinye na ibe ndenye ego.
A ga-emefu ego a n'Africa gaa:
Kwado mmụta na kpochapụ agụmakwụkwọ.
Nye aka na mkpochapu nke oke ịda ogbenye na agụụ.
Nkwado maka ngalaba ahụike site na mbenata onwu ụmụaka na ọgụ ọgụ.
Enwere onwe gị itinye aka na isonye na ịmezu ebumnuche ndị a magburu onwe ya site na inye onyinye na ndenye ọpụpụ.